खुसिको खबर। नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाउने गाल्जेन लाई हुने भयो ५ बर्ष जेल र ६० हजार जरिवाना – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/खुसिको खबर। नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाउने गाल्जेन लाई हुने भयो ५ बर्ष जेल र ६० हजार जरिवाना
एक पुरुष र एक महिला ग्राहक पाल्पाली डेरी एन्ड बेकरी सपतिर जाँदैछन् । त्यहीबेला बा१झ ७४५५ नम्बरको प्रहरी भ्यान साइरन बजाउँदै आइपुग्छ ।
प्रहरी : तपाईंहरू किन निस्किएको ? ए ! सुन्नुभएन ? तपाईंहरू जानुस् ।
पुरुष ग्राहक : बिहान दूध त किन्न पाउन पर्‍यो नि सर ।
गाडीबाट निस्किँदै महिला प्रहरी : यत्रो बेरसम्म के हेरेर बस्नुभएको थियो ?
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले काठमाडौं-१६, माछापोखरी क्षेत्रमा प्रहरीले सबै सेवा बन्द गरेको सूचना फेसबुकमा पोस्ट गर्दै जिल्ला प्रशासनको निर्देशनलाई प्रहरीले फरक ढंगबाट बुझेकाले समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन् ।